ဘီဘီစီကကျွန်စနစ် - teles relay တွင်ယူကေ၏အခန်းကဏ္downကိုလျှော့ချရန်ကြိုးစားသည်
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ BLM ဆန္ဒပြပွဲများကြားမှ ၁၉ ရာစုနိုင်ဂျီးရီးယားကျွန်ကုန်သည်ကိုဂုဏ်တင်သောဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်အနေဖြင့်ဘီဘီစီမှဘာကြောင့်ထုတ်ဝေခဲ့တာလဲ။
၂၀၁၈ ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်နိုင်ဂျီးရီးယားသတင်းစာဆရာနှင့်စာရေးဆရာ Adaobi Tricia Nwaubani သည်ရိုးသား၊ ဆောင်းပါး ၁၉ ရာစုကျွန်ကုန်သည်တစ် ဦး အနေနှင့်သူ၏အဘိုးကွယ်လွန်သူ၏ဘဝသည်သူ၏ဘဝကိုမည်သို့ပုံဖော်ခဲ့ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ ။
နယူးယော့ခ်ျမှထုတ်ဝေသောအက်ဆေးတွင် Nwaubani သည်မိသားစု၊ အစ်ဂဘိုရိုးရာဓလေ့၊ ကျွန်စနစ်နှင့်ကိုလိုနီစနစ်အကြောင်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ပုံပြင်များကိုပြောကြားခဲ့သည်။ သူမကရှင်းပြသည် သူ၏အဖိုးဖြစ်သူ Nwaubani Ogogo Oriaku သည်အရောင်းအဝယ်ပြုသည့်ကျွန်ကုန်သွယ်ရေးခေတ်တွင်အခြားအာဖရိကန်များကိုရောင်းချခြင်းနှင့်နိုင်ဂျီးရီးယားရှိခရစ်ယာန်သာသနာပြုများခရစ်ယာန်သာသနာပြုများကူညီခြင်းအားဖြင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနှင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုရရှိခဲ့သည်။
သူမကသူမနာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသောကျွန်ကုန်သည်ကိုဘယ်တော့မျှရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိကြောင်းတစ်ချိန်ကသူမ၏ဖခင်ကပြောပြသည်။ သူက“ ငါဘာကြောင့်ဖြစ်သင့်တာလဲ၊ လူတိုင်းအားလေးစားခဲ့သည်။
သို့သော်သူမမှာကွဲပြားစွာမြင်သောဆွေမျိုးများအကြောင်းလည်းရေးသားခဲ့သည်။ သူမကအင်္ဂလန်မှာကြီးပြင်းလာပြီးသူမရဲ့မိသားစုရဲ့မကောင်းတဲ့အတိတ်ကိုသူမရဲ့ဗြိတိသျှသူငယ်ချင်းများနှင့်ဖုံးကွယ်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည့်သူမ၏ဝမ်းကွဲချင်းဒီအကြောင်းပြောပြသည်။ သူမအစ်ကိုဝမ်းကွဲချင်းမိုင် (Chiomia) အကြောင်းကိုလည်းရေးခဲ့သည်။ သူကကျွန်ပ်အကြောင်းရုပ်ရှင်ကြည့်သည့်အခါတိုင်း“ ငါတို့ဘိုးဘေးများကိုဘုရားသခင်ခွင့်လွှတ်ပါစေ” ဟုပြောခဲ့သည်။
စာစီစာကုံးတွင်နာဝူဘနီသည်နာကျင်မှုနှင့်ညစ်ညမ်းသောသမိုင်းကြောင်းမှခွဲထွက်ရန်သူမ၏မိသားစု၏ကြိုးပမ်းမှုများကိုမီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။ သူမသည် ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင်သူတို့ဘိုးဘေးများ၏ရာဇ ၀ တ်မှုများအတွက်အပြစ်ပေးခံခဲ့ရသည်ဟုယုံကြည်သောကြောင့်သူမမိသားစု ၀ င်ကအတိတ်၏ရက်စက်ယုတ်မာမှုများမှခွဲထုတ်ပစ်ရန်အမည်သစ်ကိုရွေးချယ်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည် သူမသည်လည်းကျွန်ရောင်း ၀ ယ်မှုတွင်သူ၏အခန်းကဏ္publicကိုလူသိရှင်ကြားရှုတ်ချရန် ၂၀၁၁ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင်သူမမိသားစုကျင်းပခဲ့သောကယ်ဆယ်ရေးအခမ်းအနားကိုဂုဏ်ယူစွာဖော်ပြခဲ့သည်။ “ အခမ်းအနားအတွင်းမှာကျွန်မစိတ်သက်သာမှုရသွားတယ်၊ နောက်ဆုံးတော့ကျွန်မရဲ့မိသားစုဟာတီးတိုးသံတွေထက်ကျော်ပြီးခြေလှမ်းတွေလှမ်းလိုက်တယ်။
နယူးယော့ခ်ျမှန ၀ူ ဘီနီ၏မှတ်တမ်းအရသူ၏မိသားစုသည်သွေးဆောင်မှုကိုတွန်းလှန်ခဲ့သည် သူတို့၏အဘိုးကိုသူ၏အချိန်ကာလ၏ထုတ်ကုန်တစ်ခုအဖြစ်လက်ခံရန်ကျွန်စနစ်အပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင့်ကြံပြုမူခဲ့ပြီးသူ၏စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောအမွေအနှစ်မှလုံးဝပြိုကွဲခဲ့သည်။
အကယ်၍ ဤစာစီစာကုံးသည် Nwaubani ၏မိသားစုသမိုင်းကြောင်းကိုသာမှတ်တမ်းတင်ခဲ့လျှင်၎င်းသည်လူ့သမိုင်းတွင်အဆိုးရွားဆုံးသောကာလတစ်ခုကိုရိုးသားစွာမှတ်တမ်းတင်ရန်ကြိုးပမ်းရာ၌သူ၏စိတ်ရင်းစေတနာပါ ၀ င်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။ သူမသည်အာဖရိကရှုထောင့်ကနေကျွန်ကုန်သွယ်မှု၏တစ် ဦး သည်ခိုင်ခံ့, ထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းနှင့်လွတ်မြောက်ခြင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအဖြစ်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်နိုင်ဘူး။ ထို့အပြင်ယနေ့တိုးတက်သောနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွင်သူသည်မိသားစုများ၊ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းများသည်ဘိုးဘေးများ၏ရာဇ ၀ တ်မှုများအပေါ်မည်သို့ရိုးသားစွာပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်ပြီးသမိုင်းမမျှတမှုများမှသူတို့ကိုယ်တိုင်မည်သို့လွတ်မြောက်နိုင်ကြောင်းဥပမာတစ်ခုပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ။
Minnesota ရှိ George Floyd အားရဲတပ်ဖွဲ့ကလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုအပြီး ၇ ပတ်အကြာဇူလိုင် ၁၉ တွင်ကမ္ဘာချီလူမျိုးရေးတရားမျှတမှုအတွက်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်လာပြီးနောက် Nwaubani သည်သူ၏အဘိုး၏အဖြစ်အပျက်ကိုပြန်လည်ပြောပြရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဘီဘီစီမှာကြိမ်။ အသစ်က ဆောင်းပါး "ကျွန်တော့်အဘိုးကျွန်တွေကိုရောင်းလိုက်တယ်" ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တပ်ထားတယ်။ အသစ်သောအယ်ဒီတာ့အာဘော်နှင့်ကျွန်ပိုင်ရှင်၏အမွေကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ရန်သူ၏မိသားစု၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကိုတစ်ခါမျှဖော်ပြခြင်းမရှိပါ။
ဤအချိန်တွင်နိုင်ဂျီးရီးယားသတင်းစာဆရာကသူ၏အဖိုးကို "အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာတစ်လျှောက်ရှိအခြားအာဖရိကန်များကိုရောင်းချခြင်းဖြင့်အာဏာနှင့်စည်းစိမ်ဥစ္စာများရရှိခဲ့သူ" ဟုမဟုတ်ဘဲ "စီးပွားရေးသမား" တစ် ဦး အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည် "အသင့်လျော်ဆုံးသောအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူနှင့်သတ္တိအကောင်းဆုံးသော" အချိန်တွင်နေထိုင်ခဲ့သည်။
သူ့မိသားစုတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရသောကျွန်စနစ်အပေါ်ကြေကွဲဖွယ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုများကိုလည်းဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။ ရလဒ်အနေနှင့် New Yorker ဆောင်းပါး၏သွင်ပြင်လက္ခဏာကိုဖော်ညွှန်းသည့်ပြည့်စုံကောင်းမွန်သောကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာလက္ခဏာမပြပါ။
ထင်ရှားသည်မှာလွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ကထုတ်ဝေခဲ့သောမူလစာစီစာကုံးနှင့်မတူဘဲဘီဘီစီဆောင်းပါး၏ရည်ရွယ်ချက်မှာမိသားစု၏ဘိုးဘေးများ၏စက်ဆုပ်ဖွယ်ကောင်းသောလုပ်ရပ်များနှင့်အဆုံးအဖြတ်ပေးရန်မိသားစု၏ရုန်းကန်မှုကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်မနေ့က၏ကျွန်သခင်များကိုယနေ့ကျင့်ဝတ်စံနှုန်းများဖြင့်မစီရင်သင့်ကြောင်းဖော်ပြခြင်းဖြင့်ဤဘိုးဘေးအားကာကွယ်ရန်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။
ကျွန်စနစ် - Timothée de Fombelle:“ သတ္တ ၀ ါတိုင်းဟာပြိုကွဲသွားပြီ။
Malcolm X မှ Dongala အထိ၊ အာဖရိကတိုက်ရှိစာအုပ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုရွေးချယ်ခြင်း။
လူနေမှုဘဝအတွက်ကုန်သွယ်မှုပြုခဲ့သူတစ် ဦး အားဂုဏ်တင်ရန်အပြင်းအထန်ကြိုးပမ်းနေသည့်ဘီဘီစီဆောင်းပါးတွင်န ၀ူ ဘီနီကသူ၏အဘိုးအဘိုးကိုသူရဲကောင်းအဖြစ်ဖော်ပြသည့်သမိုင်းကြောင်းကိုပင်ဝေမျှသည်။ ဗြိတိသျှကိုလိုနီအစိုးရ၏ကျွန်အချို့နှင့်ကျွန်တော်တို့နောက်မှအောင်မြင်စွာရင်ဆိုင်ရန် "
ဘီဘီစီဆောင်းပါးသည် Nwaubani Ogogo Oriaku ၏အမွေအနှစ်ကိုဖြူစင်အောင်လုပ်ရန်ကြိုးပမ်းရုံသာမကအာဖရိကန်အပေါ်အရောင်းအ ၀ ယ်ကျွန်ရောင်းဝယ်မှုကိုအပြစ်တင်ရန်လည်းကြိုးပမ်းသည်။ သူက“ အစ်ဂဘိုအကြားလူသားများကို ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းသည်ဥရောပသားများမရောက်ရှိမီကြာမြင့်စွာကတည်းကပြုလုပ်ခဲ့သည်” ဟုဖော်ပြထားသည်။ ထိုသို့ပြုရာတွင်ဆောင်းပါးသည်ရှင်းလင်းစွာရည်ရွယ်ထားသည် ကစား လူကုန်ကူးမှုတွင်ဗြိတိန်၏အခန်းကဏ္နှင့် ပတ်သက်၍ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၁၁-၁၄,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ခန့်ရှိသောအာဖရိကန်သားများ၊ ပင်လယ်ထဲတွင်သေဆုံးခဲ့ရသည်၊ သို့မဟုတ်အမေရိကရှိဒေါသထွက်နေသောမုန်းတီးနေသောလူအုပ်များသို့မဟုတ်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောကျွန်သခင်တို့၏လက်ဖြင့်
ဘီဘီစီသတင်းဆောင်းပါးတွင် Nwaubani သည်ကျွန်စနစ်သည်အာဖရိကတိုက်၏တည်ဆောက်မှုမျှသာဖြစ်သည်ဟုထင်မြင်စေရုံသာမကဗြိတိန်နိုင်ငံ၏နိဂုံးချုပ်အဆုံးသတ်ရေးအတွက်လည်းချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။ ဉာဏ်အလင်းနှင့်ထောက်ထားစာနာတတ်သောဗြိတိသျှအင်ပါယာ၏အကူအညီမပါဘဲ၊ ကျွန်ရောင်းဝယ်မှုသည်အလိုအလျောက်ဖြစ်မည်မဟုတ်ဟုနဝူဘနီကယုံကြည်သည် jamais အဆုံးသတ်ခဲ့သည် အကယ်၍ Igbos သည်ရုပ်ထုများကိုချစ်မြတ်နိုးပါကသူ၏အဘိုးသည်သူ၏ဂုဏ်အသရေ၌တည်ဆောက်ရန်ထိုက်တန်သည်ဟုသူမကအကြံပြုသည်။
ဒီတော့ဘာကြောင့် Nwaubani ဟာအဘိုးရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြဖို့နဲ့လူမျိုးရေးတရားမျှတမှုအတွက် Black Live Matters လှုပ်ရှားမှုရဲ့နောက်ဆုံးတောင်းဆိုမှုကိုခံရတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုကာကွယ်ရေးပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလဲ။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်လော ဘာလို့ဘီဘီစီလဲ ၁၉ ရာစုနိုင်ဂျီးရီးယားကျွန်ကုန်သည်ကိုသမိုင်းတွင်အရေးပါသောအချိန်၌ဂုဏ်ပြုသောအရာနှင့်အတူဗြိတိသျှအင်ပါယာ၏ဒဏ်ရာအနာတရဖြစ်မှုနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားယိုယွင်းခြင်းတို့ကိုရွေးနုတ်ရန်အမျိုးသားရေးတာ ၀ န်ရှိကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် ?
Nwaubani ၏ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောအလွန်အကာအကွယ်ပေးသောမှတ်တမ်းသည်သူ၏အဘိုး၏ဘ ၀ ကိုအလွန်အမင်းအခွင့်ထူးကိုကာကွယ်လိုသောဆန္ဒရှိသည်။ ၎င်းသည်သမိုင်းကိုပြန်လည်ရေးဆွဲရန်နှင့်အမေရိက၏အတိတ်ကိုပုံသွင်းခဲ့သောကျွန်ပိုင်ရှင်များနှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်သူများအားသမ္မတ Donald Trump ၏အပူတပြင်းကြိုးစားမှုကိုအမှတ်ရစေသည်။ ၏မျက်နှာ Terre "။
ဘီဘီစီနှင့် ပူးပေါင်း၍ သူမသည်ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏အဓိကတာဝန်မှ transatlantic ကျွန်ရောင်းဝယ်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ အာဖရိကတစ်လွှားကိုလိုနီခေတ်အဆောက်အအုံများတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုအဆင့်အတန်းများကျူးလွန်ခြင်းများကိုအနည်းငယ်သက်သာစေရန်ကြိုးစားသည်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ။
ဗြိတိသျှတို့၏ကျွန်စနစ်နှင့်ကိုလိုနီစနစ်ကြောင့်ဘီဘီစီသည်ရုပ်မြင်သံကြား၊ ရေဒီယိုနှင့်အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းများမှတဆင့်အာဖရိကတစ်လွှားကျယ်ပြန့်စွာရောက်ရှိနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အာဖရိက၌ယုံကြည်စိတ်ချရပြီးလူကြိုက်များသောအသံဖြစ်သည်။ သို့သော် Nwaubani ၏ဆောင်းပါးကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားသကဲ့သို့ပင်ကမ္ဘာကြီးသည်တရားမျှတမှုနှင့်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲမှုလေပြင်းတိုက်ခတ်နေသည့်အချိန်၌ပင်ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ခိုင်မာသောငြင်းဆန်မှုအားခုခံကာကွယ်ရန်တိုက်တွန်းချက်ကိုသူမတွန်းလှန်နိုင်ခဲ့ပါ။ ရာစုနှစ်များစွာကျွန်ကုန်သွယ်ရေးတွင်ယင်း၏ ဦး ဆောင်အခန်းကဏ္ကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။ ။
အဲဒါဟာ ၂၀၁၅ အထိပဲမဟုတ်ဘူး le ထိုအချိန်ကဗြိတိသျှ ၀ န်ကြီးချုပ်ဒေးဗစ်ကင်မရွန်ကဂျိမ်းစ်လူမျိုးများအားကျွန်ပြုမှုကုန်သွယ်မှုကိုဖျက်သိမ်းရာ၌အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၏အခန်းကဏ္praကိုချီးကျူးနေစဉ်“ ကျွန်ဘဝ၏နာကျင်ဖွယ်အမွေအနှစ်” မှထွက်သွားကြရန်ပြောကြားခဲ့သည် des ကျေးကျွန် လက်ရှိ ၀ န်ကြီးချုပ်ဘောရစ်ဂျွန်ဆင်သည်ဗြိတိသျှအင်ပါယာအပေါ်သူ၏လေးစားမှုနှင့်သူ၏ထပ်ခါတလဲလဲကြိုးစားမှုကြောင့်လူသိများသည် ၏အခန်းကဏ္ ဗြိတိသျှ ကျွန်စနစ်၌တည်၏ .
ဗြိတိန်၏ကိုလိုနီအမွေအနှစ်ကိုကမ္ဘာကအာရုံစိုက်နေသောကြောင့်ကျွန်စနစ်ကိုအာဖရိကဆောက်လုပ်ရေးအဖြစ်ဖော်ပြသည့်န ၀ူ ဘူနီ၏ဆောင်းပါးကိုဘီဘီစီမှအဘယ်ကြောင့်ထုတ်ဝေရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ကိုနားလည်ရန်လွယ်ကူသည်။
က Les ကျွန်ကုန်သည်များ၏ရုပ်တုများ၊ ဗြိတိသျှကုန်သည်အက်ဒွပ် Colston ကဲ့သို့သောအမျိုးသားများသည် ၁၆၀၀ ပြည့်လွန်နှစ်များနှောင်းပိုင်းတွင်ကျွန်ရောင်းဝယ်မှုမှတစ်ဆင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုရရှိခဲ့ကြသောအတင်းအဓမ္မပြန်ပေးဆွဲခံရသည် ယူအက်စ်အေမှာ ဗြိတိန်နှင့်အခြားဥရောပနိုင်ငံများတွင်ပါ။ ယူနိုက်တက်စတိတ်သည်၎င်း၏ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောအတိတ်နှင့်လက်ရှိပေါ်လစီများကိုရဲ၊ ဟောလိဝုဒ်စတူဒီယိုများတွင်လည်းအလားတူပင်ဖြစ်သည်။ ကြီးမားသည်နှင့်တူသည် ကုမ္ပဏီများ, ထိုကဲ့သို့သော Facebook နှင့် Netflix ကအဖြစ်။
အလားတူပါပဲ အာဖရိကန် အားလုံးရဲ့ အရောင်များ .
ရင်းမြစ် - https: //www.aljazeera.com/indepth/opinion/bbc-latest-attempt-play-uk-role-slavery-200730095612890.html
ယူဂန်ဒါတရားမဝင်ဖမ်းဆီးသူထောင်ဒဏ် ၁၁ နှစ်